Fiarahamonina sivily: ”Takinay ny hamoahana fanitsiana ny tetibola” | NewsMada
Manahy ny amin’ireo laharam-pahamehan’ny governemanta ao amin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fanitsiana ny tetibola (PLFR) 2021, mandritra izao krizy ara-pahasalamana izao sy ny tsy fisian’ny sehatra marolafy iaraha-midinika mialoha ny fitsinjarana ny volam-panjakana ny firaisamonina sivily, araka ny fanambarana: “Aiza ny volavolan-dalàna mifehy ny fanitsiana ny tetibola 2021?”. Manao sonia izany, ohatra, ny Hetsika Rohy, ny CCOC, ny ONG Saha, ONG Hitsy…
Noho izany, takin’izy ireo ny hametrahana ny PLFR 2021 faran’izay haingana eny anivon’ny Antenimierampirenena mba hananany fotoana handinihana sy hiadian-kevitra momba izany mialoha ny fandaniana azy. Eo koa ny hamoahana sy hanapariahana malalaka izany miaraka amin’ny fametrahana azy hahazoan’ny olom-pirenena sy ny firaisamonina sivily mandinika ary miady hevitra momba azy amin’ireo tomponandraikitra mialoha ny fandaniana azy.
Takin’izy ireo koa ny hanamafisana ny fandraisan’anjaran’ireo minisitera isan-tsokajiny amin’ireo sehatra fikaonandoha marolafy karakarain’ny firaisamonina sivily momba ny PLFR 2021. Mba hisian’ny fangaraharana sy ny fisitrahan’ireo olom-pirenena ny antontam-baovao momba ireo paikady hitondrana ny fireneny izany.
Mila hajaina ny fe-potoana
Mandidy ny lalàna fa tokony hapetraky ny governemanta mandritra ny fahefa-bolana faharoa ny PLFR ho fanajana ireo 60 andro ilaina amin’ny fandinihan’ny parlemantera izany mba hifanandrify tokoa amin’ny filan’ny vahoaka eny ifotony mialoha ny handaniana azy.
Hita anefa fa tratra aoriana hatrany ny fametrahana sy ny fanapariahana izany nanomboka tamin’ny taona 2020, nitaky hatrany ny fanairana avy amin’ny firaisamonina sivily.
“Tsy mbola hita ny PLFR hatramin’izao, raha toa ka 30 andro sisa ho tapitra ny fivorian’ny parlemantera”, hoy ny fanambarana.